फेरि अनशन बस्ने डा. केसीको चेतावनी - Setokalam.com
फेरि अनशन बस्ने डा. केसीको चेतावनी
काठमाडौं, ७ चैत । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले १७ औं पटक अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। त्रिभुवन विश्व विद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्दै विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेज संचालकलाई कारवाही नगरे पुनः अनशन बस्ने चेतावनी केसीले दिएका हुन्।
डा. केसीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिने कलेजको ठगीलाई वैधता दिने काम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गरेको दाबी गर्दै केसीले अनशनको चेतावनी दिएका हुन्।
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले संरक्षण गरेको उनको उनको निष्कर्ष छ। ‘अपराधीको संरक्षण गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही नगरिएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउँछौं’, केसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नसमेत केसीले माग गरेका छन्। गण्डकी मेडिकल र किस्ट मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थी आन्दोलित छन। गण्डकी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीविरुद्ध विद्यार्थीले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले संचालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरिसकेको छ।
मेडिकल कलेजको ठगीमा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली रमिते भएको उनको आरोप छ।